कहाँ म्याड्रिड मा खाने? शहर मा9सिफारिश रेस्टोरेन्ट | यात्रा समाचार
कहाँ म्याड्रिड मा खाने? शहरमा recommended सिफारिश रेस्टुरेन्टहरू
लोला करील | | Gastronomy, मैड्रिड
म्याड्रिड एक संग एक धेरै विश्वव्यापी शहर हो उत्कृष्ट gastronomic प्रस्ताव। सम्भावनाहरू अनन्त छन् र हामी भन्न सक्दछौं कि तपाईं राजधानीमा लगभग कुनै पनि महादेशबाट भाँडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, जब प्रस्ताव यति व्यापक छ यो छनौट गर्न गाह्रो छ। यदि तपाईं म्याड्रिडबाट हुनुहुन्न र तपाईं भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई गलत ठाउँमा बस्न र खानाको लागि पैसा तिर्ने डर छ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं शहरबाट हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं नियमित रूपमा जानुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि समान ठाउँमा खान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं पूर्ण रूपमा हराउनुहुन्छ वा यदि तपाईं नयाँ ठाउँहरू पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ म्याड्रिडमा कहाँ खाने? यस पोष्टमा म तपाईंसँग साझेदारी गर्दछ शहरमा9सिफारिश रेस्टुरेन्टहरू।
3 पेन्टहाउस ११
4 टेक्वेरिया एल चापरिटो मेयर
5 मियामा क्यास्टेलाना
8 टेवर्न र मिडिया
9 परी सिएरा टवेर्न
तपाईं म्याड्रिडको मध्यभागमा राम्रो र सस्तोमा खान सक्ने रेस्टुराँ खोज्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। Escarpín एक हो जीवनभरको अस्थिर साइडर हाउस र यो ती स्थानहरू मध्ये एक हो जहाँ तपाईं उचित मूल्यको लागि पूर्ण पेटको साथ अन्त हुन्छ। यो Calla Hilleras मा स्थित छ, प्लाजा मेयरको एकदम नजीक। रेस्टुरेन्टले १ 1975 XNUMX मा यसको ढोका खोलेको थियो र एक आधुनिक र नवीकरण गरिएको स्थान भएको छ, जबकि यसको परम्परागत सार कायम गर्दै।
Escarpín प्रदान गर्दछ सुपर पूर्ण दैनिक मेनू, पहिलो र दोस्रो पाठ्यक्रमहरूको साथ, केवल १२ यूरोको लागि। थप रूपमा, यसको मेनू एकदम फरक छ, तपाईं एक उत्कृष्ट स्वाद चखाउने मेनू छान्न सक्नुहुन्छ वा विशिष्ट अस्थिभन्डी पकवानको लागि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं जानुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् विशेष तीन चीज पनी क्याचोपो, घरको लागि मात्र विशेष, र क्लामको साथ सिमीहरू, जुन विशेष गरी राम्रो हो।
मलाई हम्मास मन पर्छ। वास्तवमा, मैले मेरो जीवनको हरेक दिन कुनै पट्टिबिना यो लिन सक्दछु। यद्यपि मैले यस्तो कल्पना पनि गरिन कि त्यस्तो रेस्टुराँमा आउँछ जुन पूरै मेनूलाई यस डिशमा केन्द्रित गर्दछ, जुन मध्य पूर्वबाट आएको हो। २०१ Hum मा इजरायली दम्पतीले खोलेको ला हम्मुसेरिया, शाकाहारी विकल्पहरूको साथ एक स्वस्थ खाना प्रदान गर्दछ जुन ह्यूमस मुख्य पात्र हो. त्यसोभए, यदि तपाईं तरकारीहरू, मसलाहरू र, अवश्य पनि, हुम्मसको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो रेस्टुरेन्ट सम्झन सक्नुहुन्न! यो प्रदर्शन हो कि तपाईं बाहिर खान सक्नुहुन्छ, असंख्य स्वादहरूको मजा लिन र उचित आहार कायम गर्न सक्नुहुन्छ।
ठाउँ पनि धेरै राम्रो छ। आधुनिक सजावट, काठ र र colors्गको संयोजनले ला हम्मुसेरियालाई धेरै आरामदायी ठाउँ बनाउँदछ जहाँ तपाईं राम्रो कम्पन श्वास.
यदि तपाईं मार्फत जानुहुन्छ वा यदि, म जस्तो, तपाईं शहर मन पराउनुहुन्छ, तपाईं राजधानी को एक उत्तम दृश्य को मजा लिई बिना म्याड्रिड छोड्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ होटलहरू छन् जुन, सबै भन्दा माथि तलामा, एक छ टेरेस खान र पिउन। यद्यपि यी स्थानहरू प्राय: सस्तो हुँदैनन्, यो समय-समयमा जाँदा मूल्यवान छ।
होटल Iberoestar लास letras को छत, एटिक 11, मेरो मनपर्ने छ। एक युवा र सावधान वातावरण संग, एटिक ११, छ सूर्यास्त हेर्न आदर्श ठाउँ, ककटेल छ र राम्रो संगीत सुन्नुहोस्। शनिबार र शुक्रवार रातमा तिनीहरूले डीजे सत्रहरू आयोजना गर्छन्, एक उत्तम योजना यदि तपाईं एक अभिनव र विशेष ठाउँमा केही समयको लागि रमाईलो हेर्दै हुनुहुन्छ भने।
अर्को चाखलाग्दो पक्ष यसको भोजन हो, भूमध्य आहारमा आधारित छ र उत्पादनहरू पेटू राष्ट्रिय मूल को। भाँचेहरु शेफ राफेल कर्डन द्वारा डिजाइन गरीएको छ र ए मा तयार पारिएको छ ग्यास्ट्रो बार ग्राहकको दृश्यमा आउटडोर स्थित।
टेक्वेरिया एल चापरिटो मेयर
कहिलेकाँही हामी भिन्न हुन र नयाँ चीजहरू खोज्न चाहन्छौं, भाग्यवश मैड्रिड त्यस्तो गर्नका लागि आदर्श शहर हो। २०२० - २०२१ का लागि यसलाई इस्ट्रो-अमेरिकी राजधानी ग्यास्ट्रोनोमिक कल्चरको नाम दिइएको छ। त्यसो भए यदि तपाईंलाई ल्याटिन खाना मनपर्‍यो भनेचिन्ता नलिनुहोस्, तपाईंले हरेक साताको अन्तमा यसमा रमाउनको लागि एउटा प्लेन समात्नु पर्दैन।
व्यक्तिगत रूपमा, म मेक्सिकन ग्यास्ट्रोनमीको बारेमा जोशिला छु र म म्याड्रिडका विभिन्न टक्वेरियाको भ्रमण गरिसकें। कुनै श doubt्का बिना, मेरो मनपर्ने "एल चापरिटो मेयर" भएको छ। यो एक ठाउँ हो, प्लाजा मेयरबाट करीव २०० मिटर टाढा अवस्थित छ र अविश्वसनीय सस्तो छ। तिनीहरूले 1 यूरो मा टाकोस प्रस्ताव गर्दछ, ताकि तपाईं लगभग सम्पूर्ण मेनु प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। ती स्वादिष्ट छन्! म मेक्सिको गएको छु र म कसम खान सक्छु कि यस ठाउँको खानाले तपाईंलाई टेलिपोर्ट गर्दछ।
यदि तपाईं केन्द्रमा हुनुहुन्छ र तपाईं ज्यादै धेरै पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, यो योजना एकदम चाखलाग्दो छ। ठाउँ एकदम रमणीय छ, यो चम्किलो रंग, भित्ति चित्र र विवरणले सजाइएको छ जुन तपाईंलाई यात्रा बनाउँदछ। स्टाफ धेरै अनुकूल छ। यदि तपाईंसँग थोरै समय छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं बारमा बस्नुहोस्, केही मार्गारीताहरू र केही टाकोस, कोचनिता पाइबिल र क्लासिक ट्याकोस अल पादरीको अर्डर गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ अझै पनी चाहनुहुन्छ भने स्वादहरु को माध्यम बाट यात्रा, तपाईं मियामा क्यास्टेलानालाई माया गर्नुहुनेछ। यो जापानी रेस्टुरेन्ट २०० in मा म्याड्रिडमा खोलियो र त्यसबेलादेखि यसले जापानी खाना मनपराउनेहरूलाई जित्न सफल भइसकेको छ।
Paseo de la Castellana मा ठीक छ, ठाउँ, न्यूनतम र आरामदायक, साथी वा परिवार संग लामो खानाको आनन्द लिन आदर्श हो। शेफ, जुनजी ओडाकाले यसका साथ मेनु बनाउने प्रबन्ध मिलाएको छ जापान को सबै भन्दा परम्परागत पकवान, यसलाई एक आधुनिक स्पर्श र एक उत्कृष्ट देखभाल सौंदर्य प्रदान गर्दै।
रेस्टुरेन्ट विशेष गरी सस्तो छैन, तर धेरै उच्च गुणस्तरको भोजनका लागि, मूल्यहरू पनि अत्यधिक छैनन्। यसको मेनूको आवाश्यकताहरूमध्ये: वाघुयू मासु, साशिमी गोरु को, nigiri टुनाको र, अवश्य पनि सुशी.
जब तपाई नयाँ शहरमा पुग्नुहुन्छ, चाखलाग्दो कुरा यसको विशिष्ट डिशहरू प्रयोग गर्नु हो। को म्याड्रिड स्टू यो समुदायको सबै ग्यास्ट्रोनोमीमा सबैभन्दा परम्परागत हो, त्यसैले, यदि तपाईं म्याड्रिडबाट हुनुहुन्न भने, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्ने अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन।
त्यहाँ असंख्य स्थानहरू छन् जहाँ उनीहरूले राम्रो स्टूको सेवा गर्दछन्, तर यदि यो तपाईंको पहिलो पटक हो ... किन यो इतिहासको साथ ठाउँमा नगर्नुहोस्? पर्सा डेल सोलबाट केही मिटरमा कासा लार्डीको स्थापना १1839 XNUMX। मा भयो। रेस्टुराँ, म्याड्रिड को सबै मा पहिलो मानिन्छ, १ th औं शताब्दी को सजावट को संरक्षण गर्दछ र यो पनि बेनिटो पेरेज गल्डेस वा लुइस कोलोमा को कडा लेखक को काम मा उल्लेख छ। त्यसोभए यदि तपाइँ सबैभन्दा परम्परागत म्याड्रिडको अनुभव लिन चाहानुहुन्छ भने यो ठाउँ तपाईको लागि खोज्नु भएको कुरा मात्र हो।
पकाइएको को रूप मा, तपाईं यो एक विज्ञान यसलाई खाने को लागी देख्नुहुनेछ। कासा लार्डीमा, तिनीहरूले यसलाई दुई भागमा सेवा गर्छन्, पहिले सूप र त्यसपछि बाँकी। मलाई यो सबै सँगै खान मनपर्दछ, मलाई लाग्दछ कि धेरै स्थानियहरूका लागि यो एक ठूलो विकृति हुनेछ। तर तपाईले जेसुकै खाए पनि स्ट्यु स्वादिष्ट हुन्छ र जाडोमा ठूलो लाग्दछ।
यदि हामी विशिष्ट खानाको बारेमा कुरा गरिरहन्छौं भने हामी क्यालमारी स्यान्डविच बिर्सन सक्दैनौं। यो हामी मध्येको शहरका नभएका मानिसहरुका लागि "विदेशी" संयोजन जस्तो लाग्न सक्छ र यसैले त्यहाँ कोही मानिसहरु यसलाई प्रयोग गर्ने हिम्मत गर्दैनन्, तर म तपाईलाई आश्वासन दिन्छु कि यो मर्नु पर्छ। त्यहाँ धेरै छन् प्लाजा मेयर वरपर परिसर उनीहरूले यसलाई सेवा दिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू प्रायः व्यक्तिहरूले भरिएका हुन्छन् किनकि यो एकदम पर्यटकीय ठाउँ हो, तपाईको स्यान्डविच पर्खनु र खानु यसको निम्ति उपयुक्त छ जब तपाईं शहरको वरिपरि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ।
ला क्याम्पाना पट्टी म्याड्रिडको सब भन्दा क्लासिक हो र तिनीहरूले बेच्छन् केवलeयूरोको लागि क्यालमारी स्यान्डविच। सेवा धेरै छिटो छ र बियर धेरै चिसो छ तपाई अरू के चाहानुहुन्छ !?
टेवर्न र मिडिया
वाइनको साथ पेयर गरेको राम्रो डिनर भन्दा बढि केहि रोमान्टिक छ? Taberna y Media हो तपाइँको पार्टनरलाई चकित पार्न आदर्श रेस्टुरेन्ट, वा अन्य जो तपाईं कल्पना, एक घनिष्ठ र विशेष वातावरणमा उत्कृष्ट खाना संग। अरु के छ त, यो निष्पक्ष छ रेटिरो पार्कको छेउमा, म्याड्रिड को सब भन्दा प्रतीकात्मक स्थानहरु। यो हरियो फोक्सोको माध्यमबाट घुम्न पाउनु एउटा सुअवसर हो। खाना कम गर्नु भन्दा राम्रो योजना त्यहाँ छैन!
रेस्टुरेन्टको पछाडि धेरै सुन्दर कथा छ, यो बुबा र छोरा जोसे लुइस र सर्जियो मार्टिनेजको परियोजना हो, जुन उनीहरूको विचारमा सामेल भएका छन् तापस र परम्परागत राशनमा समर्पित.
यसको बारमा र भोजन कक्षमा, तिनीहरूले शीर्ष गुणवत्ताका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछन्, धेरै परम्परागत व्यञ्जनहरू हाउट भोजनका टचहरू सहित। तरकारी र कोकोका साथ ब्रेज गरिएको गाल, घरको सलाद र ट्राइपको शानदार स्वाद हुन्छ। यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ भने, जसले सँधै मिठाईको लागि अलि ठाउँ छोड्दछ, तपाईं वेनिला आइसक्रीमको साथ मलाई क्रीमी एनीज टोस्ट अर्डर गर्न प्रति सक्षम हुनुहुने छैन।
परी सिएरा टवेर्न
भर्माउट म्याड्रिडको एक संस्था हो, यदि तपाईं सच्चा रक्ता भएका मड्रिलिनियनजस्तो महसुस गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई अपरिटिफ घण्टा पनि मिस गर्न सक्नुहुन्न। म्याड्रिडमा राम्रो भर्माउथ खोज्नु अपेक्षाकृत सजिलो छ, त्यहाँ साईटहरू छन् जुन बिभिन्न प्रकारका प्रस्तावहरू पनि छन्। उदाहरण को लागी, La Hora del Vermut, in सैन मिगुएल बजारसँग कुल राष्ट्रिय मूलको 80० ब्रान्डहरू छन्। यो एक पेय पदार्थलाई समर्पित मन्दिर हो जुनसँग पनि धेरै राम्रो तप र अचार मेनू रहेको छ।
यद्यपि, म स्थानीय हुँ र यो परम्परालाई मिल्छ र भर्म्युउथ पिउन, ब्यारेल देखिने ठाउँमा राम्रो डाँठ भन्दा राम्रो अरू केही छैन। ला टाबर्ना डे एन्जेल सियरा संभवतः छ सब भन्दा प्रामाणिक ठाउँ मैले शहर मा भेटेको छु। Chueca मा स्थित छ, यो यसको सजावट को लागी अलग छ। बोतलहरू जो पर्खालमा गाडिएका छन्, गाढा काठ, चित्र र चित्रहरूले भरिएको छत, फ्रेम गरिएको स्मृति चिन्ह र कार्टुजा डे सेविलाको टाइलहरूले यो एक अद्वितीय स्थान बनाउँदछ जुन भेट्न लायकको छ।
म्याड्रिड धेरै रमाईलो छ र म पक्का छु कि तपाईं यसको प्रेममा पर्नुहुनेछ। मलाई आशा छ कि शहरमा सिफारिश गरिएका restaurants वटा रेष्टुरेन्टहरूको सूचीले तपाईंलाई यसको ग्यास्ट्रोनोमीबाट रमाईलो गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, तर यदि तपाईं राजधानीमा आफ्नो भ्रमणको अधिकतम लाभ उठाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईं सूचीबाट यसबाट प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ। म्याड्रिडमा गर्नका लागि १० उत्तम चीजहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » मैड्रिड » कहाँ म्याड्रिड मा खाने? शहरमा recommended सिफारिश रेस्टुरेन्टहरू
उत्कृष्ट पोष्ट यो मेरो खाता म्याड्रिड को लागी अर्को खाता मा लिन।
अनुग्रहलाई जवाफ दिनुहोस्
डोमिनिकन रिपब्लिकमा के गर्ने